UDHR - Shona
Universal Declaration of Human Rights - Shona
1. (Chekutanga) Munhu wese anenge apomerwa mhosva iyo ingaita kuti apiwe chirango, anekodzero yokubatwa somunhu asina mhosva kusvikira pawanikwa umbowo hokuti anemhosva, achizobatwa nayo pamberi poruzhinji nedare, apo paanenge apihwa mukana wezvose zvaangade pakuzvimirira.
2. (Chechipiri) - Hapana munhu anofanirwa kunzi anemhosva pamutemo wenyika kana mutemo wenyika dzepasi pose, panguva yechiitiko ichocho. Uyewo hapana chirango chakapfurikidza chinofanirwa kutemerwa munhu chisingawirirani nechirango chaikodzera panguva yokuparwa kwemhosva yacho inenge iripadare.
1. (Chekutanga) - Munhu wese anekodzero yokuva norusununguko rwokufamba nokugara mukati menyika imwe neimwe.
2. (Chechipiri) - Munhu wese anekodzero yokubuda muneipi zvayo nyika, zvichibatanidza nyika yake, uyewo kudzokerazve kunyika yake.
1. (Chekutanga) - Munhu wese anekodzero yokutsvaga nekupiwa pekupotera kunedzimwe nyika kana ari kuvhundutsirwa.
2. (Chechipiri) - Iyi kodzero haigone kushandiswa kana asungwa pachokwadi nemhosva dziri pachena kuti hadzisi dzezvematongerwo enyika mushure mokuita mabasa anotyora zvinangwa nemitemo yeMubatanidzwa wenyika dzepasi pose.
1. (Chekutanga) - Munhu wese anekodzero yokuva nenyika yaanobva.
2. (Chechipiri) - Hapana munhu achashaiswa nyika yake yaanogara kana kurambidzwa kuenda kundogara kuneimwe nyika.
1. (Chekutanga) Vanhurume nevanhukadzi vabvezero, vanekodzero yokuroorana nokuumba mhuri, pasina kudziviswa nokuda kwerudzi, nyika yechizvarwa kana svondo yavanopinda. Vanhu ava vanekodzero dzakaenzana munyaya dzezvekuvaka imba, pakuchata nemukuparadzwa kwawo.
2. (Chechipiri) - Wanano ichaitwa chete kana paine tenderano yakakwana pakati paavo vanoda kuwanana.
3. (Chechitatu) - Mhuri ndiyo musimboti womubatanidzwa unokosha mumusha uye inekodzero yokuchengetedzwa omene.
1. (Chokutanga) - Munhu wese anekodzero yekuita pfuma ariega kana kuti akabatana nevamwe.
2. (Chechipiri) - Hakuna munhu achatorerwa pfuma yake.
1. (Chekutanga) Munhu wese anekodzero yokuva norusununguko rwokusangana nokuvanamwe murunyararo
2. (Chechipiri) - Hapana munhu anofanirwa kumanikidzwa kuvenhengo yeripi zvaro bato.
1. (Chekutanga) - Munhu wese anekodzero yokubatsira mukutongwa kwenyika yake, pachake kana kuburikidza nekuvamiriri vakasarudzwa zviri pachena.
2. (Chechipiri) - Munhu wese anekodzero yakaenzana yokushandira hurumende yomunyika yake.
3. (Chechitatu) - Zvido zvevanhu ndizvo zvchava musimboti wemasimba okutonganawo hurumende: zvido izvi zvicharatidzwa nguva nenguva nesarudzo iri pachokwadi iyo ichange ichizoitwa nomunhu wese anekodzero yokuvhota, sarudzo iyi ichaitwa vanhu vakasununguka uye zvisina kubiridzira .
1. (Chekutanga) - Munhu wese anekodzero yokushanda, kusarudza basa raanoda kuita, nekuva nomushandiro wakanaka uyewo nekudzivirirwa kuti asaite rovha.
2. (Chechipiri) - Munhu wese, pasina kusarura kupi zvako, anekodzero yokuwana mugove wakaenzana nowomunhu wese anoita basa serake.
3. (Chechitatu) - Munhu wese anoshanda anekodzero yokuwana mugove wakanaka zvichiita kuti iye pachake nemhuri yake vawane magariro anokodzera ehunhu uchiwederwa, kana zvichikodzera nedzimwe nzira dzokuchengetedzwa kwemagaririo akanaka.
4. (Chechina) - Munhu wese anekodzero yokuumba nokuvanhengo yemasangano anomirira vashandi kuti agone kuchengetedza zvido zvake.
1. (Chekutanga) - Munhu wese anekodzero yokuva nemagariro akakwana kuti ave nohutano hwakanaka nokurarama zvakanaka iye pachake nemhuri yake achiwana kudya, zvipfeko, imba, kurapwa nezvose zvinodikanwa pamagariro omunhu nekodzero yokuchengetwa panguva yokushaiwa basa, hurwere, kuremara, kufirwa, kukwegura kana chipi zvacho chipingidzo muupenyu.
2. (Chechipiri) - Huzvere kana nguva yohwana hudiki inguva yokubatwa zvakanaka nokubatsirwa. Vana vese, zvisinei kuti vakaberekwa zvakaita sei, vachachengetwa zvakayenzana.
1. (Chekutanga) - Munhu wese anekodzero yokuwana dzidzo iyo ichange iri pachena , zvikuru panguva yehwana hudiki, inova ndiyo nguva yakakosha. Dzidzo panguva iyi ichamanikidzirwa. Dzidzo dzezvemibato yemaoko neyemumahofisi ichaitwa kuti ivepo zvekare, dzidzo iripamusoro ichawanikwa maererano nemagonero emunhu.
2. (Chechipiri) - Dzidzo ichanangiswa kusimudzira zvakakwana munhu nokusimbaradza kuremekedzwa kwekodzero dzavanhu uyewo nerusununguko rwavo runokosha. Dzidzo ichakuridzira kunzwisisa, kuregererana nohusahwira pakati penyika, marudzi kana mapoka ezvedzisvondo, uyewo ichatungamidza mabasa emubatanidzwa weNyika dzepasi pose ekuchengetedzwa kwerunyararo.
3. (Chechitatu) - Vabereki vanekodzero yokusarudza dzidzo ichapihwa kuvana vavo.
1. (Chekutanga) - Munhu wese anekodzero yokuteedza akasungunuka tsika dzemunzvimbo maanogara kufadzwa nezvemitambo nokubatidzawo mumabasa ebudiriro.
2. (Chechipiri) - Munhu wese anekodzero yokuwana kuchengetedzwa kwemararamiro nezvido zvake zvinobva munezvaanamazvi- kokota, zvemitambo, nemuzvinyorwa izvo anenge akanyora ega.
1. (Chekutanga) - Munhu wese ane zvinhu zvaanofanirwa kuita munzvimbo maanogara umo munozoita kuti iye pachake, agone kuzvisimudzira akasununguka pahunhu hwake zvakakwana.
2. (Chechipiri)- Achishandisa kodzero dzake norusununguko rwake munhu wese achavanomwero wakatarwa nomutemo chete, ndokunge izvi zvichiitirwa kupa cherechedzo noruremekedzo rwunodiwa kukodzero norusununguko rwunodiwa rwavamwe nokuita zvido zvevanhu.
3. (Chechitatu) - Kodzero iyi norusununguko urwu hazvigone kushandiswa nenzira inotyora zvinangwa nedonzvo reMubatanidzwa weNyika dzepasi pose.